Iimpawu Ezingenakuphikwa Zokudlala ngothando - Ukuthandana Tips
Iimpawu Ezingenakuphikwa Zokudlala ngothando
Ukuba ucinga ukuba umntu unomdla kuwe, kodwa awunalo ithemba, ngumbono olungileyo ukubukela iimpawu zokudlala ngothando. Ezinye iimpawu zokudlala ngothando zicacile, njengokuchukumisa, kunye neminye imiqondiso yokudlala ngothando,njengokujongwa ngamehlookanye ukuncoma, kungangqalanga. Izinto ocinga ukuba zinokuba zizimbo zobuhlobo ezinokubonisa umdla wothando.
Olunye lweempawu ezinzima zokudlala ngothando ukuze ulufumaneuqhagamshelo lamehlo. Ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukwahlula ukubonana ngamehlo okungaqhelekanga nokudlala ngothando. Ukuze uxele umahluko, kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni eyahlula incoko yamehlo yokuncokola ukusuka kuhlobo olubonisa umdla.
Iimpawu ze-10 zeQabane eliKopayo
Izipho ezili-12 zothando kubafana
I-8 Iimbono zezipho zothando kuye
Uninzi lwabantu ludibana emehlweni xa kuqhubeka incoko. Ke, ayingombono olungileyo ukucinga ukuba wonke umntu odibana nawe uthumela umyalezo wothando. Xa umntu ejonge ngamehlo okwemizuzwana nje embalwa kunaleyo ibonakala iyindalo kwincoko ethile, kodwa ke kukho ithuba elihle lokuba udlala ngothando nawe. Ukongeza ukudibana kwamehlo ixesha elifutshane kunokuba bekulindelwe kunokongeza ukusondelelana kunye kwaye ngokuqinisekileyo inokuba yenye yeempawu zokudlala ngothando.
Ngaphakathi kwigumbi elinabantu abaninzi
Ukuba uphawula ukuba umntu ongaphaya kwegumbi uzama ukukubamba, emva koko uncume xa ujongana naye, oko kunokuba luphawu lokudlala ngothando. Ukuyivavanya, ncuma xa umrhanelwa onomdla ekubambiseni iso, emva koko ujonge kude imizuzwana embalwa. Xa ujonga ngasemva kwicala lomntu, ukuba usakujonga, kukubheja okukhuselekileyo ukuba ukudlala ngothando kuyenzeka.
Ungaxela okuninzi malunga neenjongo zomntu ngokujonga ulwimi lomzimba wakhe. Xa kuziwa kulo naluphi na uhlobo lonxibelelwano lomntu, ngakumbiumdla wothando, izenzo zihlala zithetha kakhulu kunamazwi.
Kubonakala ngathi ukubamba okuqhelekileyo kwincoko ngamanye amaxesha kunokubonisa umdla wothando. Kuxhomekeka kwindlela eyenziwe ngayo, kunye nobuntu babantu ababandakanyekayo, izinto ezilula ezibonakala ngathi zithandeka kakhulu zinokuba kukudlala ngothando. Umntu othoba ngobunono okanye athelekise ilinen yomkhono wejezi yakho, okanye ovumela isandla sakhe ukuba siphumle kancinci engalweni yakho ngexesha lencoko unokuba udlala ngothando nawe. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abanye abantu ngokwendalo bachaphazeleka ngakumbi kunabanye, ke kuya kufuneka unike ingqalelo indlela umntu asebenzisana ngayo nabanye abantu ukuvavanya iinjongo. Ukuba ubonakala ukhethelwe ingqalelo ekhethekileyo, kusenokwenzeka ukuba lo mntu unomdla kakhulu wokwazi kuweinqanaba lothando.
Ukuba uyemka xa umntu othile ekuchukumisa, uya kuba uthumela umqondiso wokuba indlela onomdla ngayo ayamkelekanga. Ukuba awuphenduli konke konke, uthumela umyalezo ukuba awuhlali ungonwabanga ngezenzo zomnye umntu. Ukuba uphendula ngohlobo olufanayo ngokuqalisa unxibelelwano olungaqhelekanga olwakho, indlela oziphethe ngayo yazisa loo mntu ukuba uyayibona kwaye uyibuyisela kumdla onokubakho kwaye unokuba nomdla wokumazi ngcono. Umzobo womzimba (ukulingisa oko kwenziwa ngomnye umntu, njengemilenze enqamlezileyo, isandla esilevini, njl.njl.) Ibonisa umdla ngokunjalo kwaye ibonisa ukuba uyavumelana.
Ukuchukumisa izinto zakho okanye iinwele
Olu luhlobo lokondla olwenziwa ngamanye amabhinqa ngaphandle kokuyiqonda, kodwa ibonisa umdla. Ukudlala ngeenwele okanye ukungxama nge-accessory ayisiyomikhwa yovalo.
Abantu bazama ukusondela kuphela kubantu ababathandayo, ke ukuba umntu uzama ukwandisa ukusondela kuwe, kukho ithuba elihle abanomdla kulo.
Iimpawu zokudlala ngothando ezithethiweyo kunokuba lula ukuzibona, kodwa ukuba awunikeli ngqalelo, banokukudlula.
Le yeyona ilula ukuyitolika. Ukuncoma yindlela yokubonisa ukuvuma okucacileyo. Ngaba wathi uyawathanda amehlo akho? Uncumo lwakho? Nditsho nelokhwe yakho? Mhlawumbi unomdla.
Xa umntu esenza iinzame zokukwenza uncume okanye uhleke, bahlala bezama ukukukholisa ngokuhlekisa kwabo.
Phinda ujonge indawo yokudlala nale. Ngaba into oyithandayo iyakugculela? Ilingana nenkwenkwana encinci ebaleni lokudlala etsala iinwele zakho enkulisa. Ukunika ixesha elinzima ngamanye amaxesha yindlela yokudlala ngothando.
Ukubiza Igama Lakho
Ukusebenzisa igama lomntu kwincoko yindlela yokwenza ukuba bazive besondele kuwe. Ukuba uqhubeka uliva igama lakho xa uncokola nomntu, mhlawumbi unomdla kwaye uzama ukwenza ibhondi.
Yakha umdlalo wakho wokudlala
Nantsi enye ebonakalayo.Imigca yokuthabatha, ukuba nje ayifanelekanga, inokusetyenziswa ngokubanzi njenge-ice-breaker kwaye ngethemba lokukhokelela kumhla. Bathanda ukuba bahlekise kwaye babonakale, ke kunzima ukuba baphoswe.
Ngaba umntu othetha naye uzama ukukubandakanya kwincoko kunokuba enze amagqabantshintshi apha naphaya okanye ekulungiseleleni ukuze aqhubeke nokuqhubeka ukuze azive ethetha? Unomdla ngokusemthethweni kwinto oyithethayo-nasekukukwazi.
Akufanele ucinge ukuba wonke umntu okuncumelayo udlala ngothando nawe. Nangona kunjalo, ungachazela okuninzi malunga neenjongo zomntu malunga nawe kunye nomdla kuwe kwindlela ancuma ngayo xa enxibelelana nawe.
Umzekelo, ukuba umntu othile ujongana nawe ngaphesheya kwigumbi elinabantu abaninzi aze ancume aneentloni xa ekubamba ngamehlo, kungenzeka ukuba wenze ukuthanda kancinci. Ukuyivavanya, xa ujonga kwakhona umntu oqale ngamehlo, jonga ukuba usencumile na. Ukuba uncumo olunentloni lwaluyimbonakaliso yeentloni zokubanjwa ujonge kuwe, umntu uya kujonga kude kwakhona. Ukuba injongo ibiyiyouneentloni zokudlala ngothando, nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba uya kuhlala ejonga ngamehlo kwaye ancume nangakumbi ngeli xesha.
Kukho umahluko omkhulu phakathi koncumo oluchubekileyo noluvulekileyo ngokwenyani. Xa uncumo lomntu lufikelela emehlweni, kwaye ubuso bonke bubonakala bukhanya, ngumqondiso wothando lokwenene. Isenokuba luncumo lobuhlobo, kodwa ikwabonisa umdla wothando. Into yokuqala ekufuneka uyijongile xa kuvavanywa ukuba uncumo lubonisa ukuba unomdla ngamehlo aloo mntu. Uncumo oluchubekileyo alufikeleli emehlweni. Ukuba ubona ukuqaqamba emehlweni omntu, jonga ezinye iindlela zokudlala ngothando kunye noncumo lokukunceda ufumanise ukuba ngaphezulu kokuba ubuhlobo bungabakhuthaza ukuqaqamba kwiso lomntu.
Iimpawu zokudlala ngothando zokungahoyi
Zininzi iindlela zokudlala ngothando phaya, kodwa khumbula, ngenxa yokuba umntu ekudlala ngothando akuthethi ukuba unomdla wokwenene kuwe. Ngamanye amaxesha, abantu abakw ubudlelwane okanye abatshatileyo ngudlalani, kodwa akuthethi nto ngayo. Kubantu abaninzi, ukudlala ngothando kuza ngokwendalo kwaye abo banobushushu kwaye banobuhlobo banokukwenza bengazi. Gcina oku engqondweni njengoko ujonga intsingiselo ngasemva kwamagama kunye nezenzo kwaye wazi ukuba yeyiphi imiqondiso yokuthatha nzulu kwaye yeyiphi ekufuneka udlulise kuyo. Ukuchaza indawo enye apho ungafanele uzame ukubuyela ngasemva, cinga ngoku:ukudlala ngothando nomphathiuneengozi kwindawo yokusebenza.
Ayikho iNzululwazi echanekileyo
Ewe kunjalo, ukuqonda ukuba kwenzeka okanye ukungadlali ngothando akuyiyo ngqo inzululwazi. Inxalenye enkulu yokuqonda ukuba ingaba umntu unomdla wokwazi kwinqanaba lokuthandana uphuhlisa amandla okuqonda imiqondiso. Kubalulekile ukuba ungagxumi kwizigqibo malunga neenjongo zomnye umntu, kwaye kuya kufuneka uphephe ukuphendula kwizenzo zokurhanelwa zokudlala ngothando. Ukuba uyabubona ubuqili obucekeceke bokuba umntu unomdla kuwe, kwaye ufuna ukubona ukuba loo mdla unyanisekile kwaye uyavumelana na, phendula ngokwenza okuncokolayo ngokwakho.
Ikampu Imiboniso Yesilayidi Gourmet Food Ihalloween Makeup Techniques Iindlela Zasekhaya Ukwenza Isijwili Ukulahlwa Kwepet
Malunga Iincwadi Zabantwana
Malunga I Paranormal
imele ntoni ibhegi ye-mcm
yimalini ukuthenga inkawu
amachibi okubhukuda enja-kufuphi nam
ozokubeka ntoni kwikhadi lomngcwabo
iintyatyambo zexabiso eliphantsi kwi-Intanethi zomngcwabo
Isuti efanelekileyo yokuhlamba ulusu olukhanyayo